Global Voices teny Malagasy » Mampiseho ny fanaovan’ny governemanta antsirambina ny toeram-bakoka any Bangladesh ny fandravana ny tranobe tranainy efa 150 taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2019 13:04 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Ny fanjakan’i “Jahaj Bari” efa rava talohan’ny nandravana azy. Io no tranom-barotra voalohany tao Dhaka, renivohitr’i Bangladesh natsangana tamin’ny taona 1870. Sarin’i Shakil Ahmed. Nahazoana alalana.
Narodana an-tsokosoko ny tranobe efa vakoka naharitra nihoatra ny zato taona tao Dhaka ny alin’ny Eid-ul-Fitr  tamin’ny 5 Jona 2019. Naorina tamin’ny taona 1870 ity trano be miendrika sambo ity izay fantatra ao an-toerana amin’ny anarana hoe “Jahaj Bari” ary noheverina ho tranobe ara-barotra voalohany tao andrenivohitr’i Bangladesh. Nahatonga ny olona maro hiresaka momba ny tsy firaharahiana ireo harena ara-javakanto ao Dhaka izany fandravana izany.
Araka ny tatitry ny fampitam-baovao , ireo mpanohana ny antokon’ny fanjakana, Awami League  (AL) no nitondra bilidaozera miisa telo teo an-toerana ary nandrodana ny tranobe. Nanambara ireo mpanohana fa nividy ilay tany mba hananganana tranobe misy rihana maro teo amin'ilay toerana ny mpitarika azy ireo, izay solombavambahoaka ao an-toerana (Dhaka-7 ) Haji Md. Salim. Nanambara ihany koa ireo mpanohana ny AL fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny vakoka ara-tantara ny tranobe.
Fanambarana avy amin’ny biraon'ny mpikambana ao amin’ny Parlemanta HAJI SELIM nilaza fa nividy ny tany izy ary manan-jo hanapa-kevitra na tokony harodana na tsia ilay tranobe. Ahoana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo ? ….toa hoe …
Ny 13 Aogositra 2018, nanome  baiko ny Fitsarana Ambony ny Masoivohon’ny governemanta tompon’andraikitry ny fandrindrana ny fampandrosoana an-tanandehibe ao Dhaka mba tsy hanaiky na hanome alalana ny fandravana na ny fanovana ireo tranobe arkeolojika manan-danja miisa 2.200 manerana ny renivohitra. Anisan'ny fananana Waqf (lova tsy mifindra)  ihany koa ny Jahaj Bari izay tsy azo amidy noho izy anisan'ny fanomezana avy amin'ny mpanao asa soa. Araka  ny mpandrindra ny fitantanana ny Waqf ao Bangladesh  dia tsy maintsy ilaina ny fanomezan-dalana mba hanomezana na hivarotana na hanovana ny fananana Waqf rehetra. Mifanohitra amin’izay nolazain’ny mpikatroka AL fa hoe tsy ilaina ny fanomezan-dalàna raha hivarotana na handravana ilay tranobe resahana.
Tamin’ny volana Martsa 2019, nisy ny fikasana  handrodana ilay tranobe. Nametraka fitoriana  mba hampiatoana ny fandravana sady nitatitra ny baikon'ny Fitsarana Ambony voalaza etsy ambony ny Urban Study Group , vondrona iray tsy mitady tombombarotra izay notantanan’ireo mpilatsaka an-tsitrapo voatokana hiaro ny fanorenana an-tanàndehibe manan-tantara tao Dhaka fahiny.
Na izany aza, faly ny mponina sasany araka ny tatitra  nataon’ny gazety fa noravana ilay tranobe. Nahatsapa izy ireo fa efa tandindonin-doza ilay tranobe ary natahotra ny fianjerany izy ireo – mampiseho fahabangana amin'ny fikolokoloana sy fanohanana amin'ny fanarenana indray ireo tranobe vakoka manan-tantara ao Bangladesh.
Lova ara-tantara—teny tsy misy varany
Maro no naneho ny hatezerany tamin’ny fandrenesana ny fandravana ny tranobe, nanoratra tao amin’ny Facebook i Shuvra Kar :
Lova, tantara, kolontsaina, ireo no teny tsy miteny eto amin’ity firenena ity !
Nanazava ny antony tokony hanavotana ity tranobe vakoka ity ilay mpanoratra Tania Kamrun Nahar .
Manana endrika tsara tarehy ny arofanin'ilay “Jahaj Bari” izay misy rihana telo. Manana tafo tsarabika lavarangana lava. Nanana maodely tsara tarehy ny tranobe manontolo ahitana andohalambo matsokotsoko, ahitana koronosy voaravaka. Nanana rafitra ioniana sy Korintiana  ireo andry. Nanana endrika niavaka izay tsy fahita firy amin’ireo tranobe hafa hita any amin’ireo faritra tranainy ao Dhaka ny tranobe. Noho izany, ilaina ny fanarenana azy.
Naorina ho renivohitr’i Bengal i Dhaka  tamin’ny taona 1610, efa taonjato efatra mahery lasa izay. Tranobe maro no naorina ary anisan’ny nanorina amin'izao endrika anisan'ny tantara sy ny vakoka tao an-tanàndehibe nandritra ny taona nitondran'ny Mughal  sy ny fanjanahantany Britanika .
Saingy nanjavona efa ela ny ankamaroan’ireo tranobe ireo. Efa manana fahasimbana ny sisa tavela tamin'izany ary lasa hifandrombahan'ireo mpibodo azy ireo izay milaza fa tompony (matetika amin’ny alalan’ny taratasy sandoka). Ohatra iray ny Bara Katra , tsangambato manan-tantara sady rafitrano naorin'i Mir Abul Qasim, ny Diwan (mpitantam-bola) an’ny Printsy Mughal Shah Shuja teo anelanelan’ny taona 1644 sy 1646 AD. Efa eo ampirodanana ilay tranobe noho ny tsy fisian’ny fikojakojana sy ny ezaka fanamafisana ary ny fahasimbana vokatr’ireo mpibodo tsy ara-dalàna .
Bara Katra . Naorina araka ny modely nentim-paharazana Aziatika Afovoany caravanserais  ary noravahana endrika maritrano Mughal. Sary nalain’i Ragib Hassan tao amin'ny Wikipedia. CC BY 2.5
Nanoratra boky maro momba ny tantara sy ny vakoka an-tanàndehiben'i Dhaka i Muntasir Mamun. Nanoratra tao amin’ny gazety teo an-toerana Bhorer Kagoj  ihany koa izy :
Nandritra ny taompolo efatra izay dia niangavy ny manampahefana aho mba hanavotra ireo tranobe vakoka toa an'i Bara Katra sy Choto Katra . Nefa tsy nisy nihaino. Inona no azonao lazaina rehefa manimba ny ampahan'ny rindrina antitra amin’ny Manda Lalbagh  nalaza ny sampan-draharahan'ny fanangonana hajian’ny paositra mba hanaovana toerana fiantsonan'ny fiarakodia? Ahoana no ahafahanao miady amin’ny hadalana ?
Namoaka  tatitra tamin’ny antsipirihany momba ny tsy firaharahian’ny governemanta ireny tranobe vakoka ireny sy ireo olona manana mahitahita izay mikasa ny handrava ireo tranobe efa miorina ireo ny vavahadim-baovao an-tserasera iray:
Efa noravaina ny trano laharana faha 14 ao amin’ny lisitry ny lova. Efa noravana ny ankamaroan'ilay trano lehibe malaza ao Sutrapur. Novaina rafitra vaovao noho ny fanavaozana ny sisa tavela tamin'ny vanim-potoan'ny Mughal tao amin’ny Moskea Bangshal Mukim Bazar Jam-e sy ny Moskea Siddique Bazar Jam-e . […] Tsy nanao na inona na inona ny tompon’andraikitra ao Rajdhani Unmayan Kartripakkha sy ny Dhaka City Corporation na dia nisy aza ny baikon'ny governemanta amin'ny fiarovana ireo tranombakoka. Nandrisika ireo olona mpierina mba handrombaka ireo fananana tranainy ary handrava izany ny tsy fandraisana andraikitr’izy ireo.
Nikarakara famoriam-bahoaka sy rojon’olona hanohitra ny fandravana ny vondrona Urban Study Group. Maniry ny hisarika ny saina ihany koa izy ireo amin’ny fiarovana ireo trano vakoka hafa izay tandindonin-doza.
Indreto misy sarin’ireo tranobe vakoka eo an-dàlam-paharavana maromaro ao Bangladesh :
Trano tranainy Zamindar  ao Nazira Bazar, Dhaka fahiny noravana . Sarin’i Shakil Ahmed. Nahazoana alalana.
Lapa Nimtali . Io no trano fonenan’ny governora mpanampy tao Dhaka nandritra ny fitondrana Mughal. Ny vavahady andrefan’ny Lapa sisa no mbola mijoro. Sarin’i Shakil Ahmed. Nahazoana alalana.
Tranobe ShankhaNidhi । Anisan’ny tranobe an-jato taonany tao Dhaka izy ity. Tsy nisy fikarakarana, efa zara raha mijoro ity tranobe ity. Sarin’i Shakil Ahmed. Nahazoana alalana.
Lapa Northbrook  na Lal Kuthi – Sary nalain'i Fritz Kapp tamin’ny taona 1904. Efa zara raha mijoro ity tranobe ity. Sary tao amin’ny Wikipedia. Azon'ny rehetra ampiasaina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/12/140584/
 tatitry ny fampitam-baovao: http://www.newagebd.net/article/74597/al-activists-demolish-old-dhaka-heritage-jahaj-bari
 Waqf (lova tsy mifindra): https://en.wikipedia.org/wiki/Mortmain
 fitantanana ny Waqf ao Bangladesh: http://www.waqf.gov.bd/
 mpibodo tsy ara-dalàna: http://southasianmonitor.com/2019/03/24/dhakas-crumbling-caravan-serais/
 Manda Lalbagh: https://en.wikipedia.org/wiki/Lalbagh_Fort
 Lapa Nimtali : http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B8
 Tranobe ShankhaNidhi : https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C
 Lapa Northbrook : http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%95_%E0%A6%B9%E0%A6%B2